Top Ibu Ibu Loss Apps | Gam akporosis
Indị n'ụdị dị ezigbo mkpa nye ọtụtụ.. Nke anyi gam akporo ekwentị ọ nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka na nke a. Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị kwuru maka ya ngwa iji mee mgbatị ahụ. Ma, e nwere ụzọ ndị ọzọ na-elekọta onwe anyị na-eji anyị gam akporo ngwaọrụ. Anyị nwekwara ike idalata ngwa ngwa site na ngwa.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ chọrọ ịkpụzi ma ọ bụ na ị na-eche ịmalite usoro nri, ndepụta a ga-amasị gị. Anyị na-ahapụ gị n'okpuru na a nhọrọ nke ngwa kacha mma ọnwụ. Njikere ịmụta banyere ngwa ndị a?
Anyị na-ahapụ gị n'okpuru na dum ndepụta nke ngwa dị na gam akporo nke ga-efufu ibu ọ bụ usoro dị mfe karị. Naanị anyị chọrọ ekwentị gam akporo anyị chọrọ n'ezie.
2 Kalori calorie - MyFitnessunes
4 Hụ Ya!
Ọ bụ omume banyere otu n'ime nhọrọ kacha mara amara site na ọtụtụ ndị ọrụ. Ekele a na ngwa ị nwere ike na-esochi nke ihe omume ị na-eme kwa ụbọchị. Ọ ga - enyere gị aka ịrụ ọrụ gị mgbe ị na-emega ahụ. Mana ọzọkwa na-edekọ calorie ndị ị gbarala. Yabụ ị nwere nyocha ziri ezi n'oge niile. Ọ nwekwara nnukwu nhazi nke na-eme ka ọ dị mfe iji.
La ngwa download bụ n'efu. Na mgbakwunye, anyị anaghị ahụ ịzụrụ ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime.
Developer: Ụlọ ọrụ Fitbit, Inc.
Kalori calorie - MyFitnessunes
Nhọrọ ọzọ a ma ama na ama maka ịrụ ọrụ ya nke ọma. Na nke a anyị nwere na-achịkwa calorie anyị na-eri kwa ụbọchị. Nwere nchekwa data na Ogbe nri na nde isii. Ya mere, na mgbakwunye na ịmara calorie ha nwere, anyị nwere ike ịhọrọ ndị ga-adịrị anyị mma maka nri anyị. Na mgbakwunye, anyị nwere nhọrọ nke i scanomi a barcode iji nyochaa njirimara data nke ngwaahịa ọ bụla. Anyị nwekwara ndụmọdụ dị iche iche.
La ngwa download bụ n'efu. Mana, anyị gafere mgbasa ozi, nke anyị nwere ike wepu site na ịkwụ ụgwọ ego.
Ọ bụ ọzọ dị ukwuu nhọrọ na guzo maka ịbụ otu n'ime ihe kalori kacha mma na anyị nwere ike ịchọta dị. Na-enye anyị ozi ekwenti na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke efere dị iche iche. Ya mere, anyị nwere ike ịmepụta menu iji masị anyị ma ọ bụ dịka mkpa anyị si dị. Na mgbakwunye, ọ na-eburu a na-achịkwa calorie anyị na-eri kwa ụbọchị. Ya mere, anyị nwere ike ịgbasochi usoro.
La na nbudata a ngwa ida ibu bụ free. Na mgbakwunye, ọ nweghị mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụrụ ihe n'ime. Nhọrọ dị mma ọzọ ị ga-atụle.
Developer: Ihe nzuzo
Aha nke ngwa ahụ ahapụla ezigbo echiche banyere otu o si arụ ọrụ. Ọ bụ ngwa nke nnukwu ọrụ iji felata. Ọ bụkwa otu n'ime ngwa zuru oke anyị nwere ike ịchọta. Na-edekọ calorie ị na-eri kwa ụbọchị. N'ihi ya, na mgbakwunye na ịmara ị nwere ike na-esochi n’oge niile. Yabụ na ọrụ ya doro anya.
La na nbudata a ngwa ida ibu bụ free. Agbanyeghị, dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị ọzọ, anyị na-achọta ịzụrụ n'ime.
Kwụsị ya! - Kalorienzähler
Developer: Ụlọ ọrụ FitNow, Inc.
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa mgbe anyị kpebiri ifelata bụ nri. Anyi aghaghi ichota nri nke kwesiri anyi. Ka ọ dị mma ma nyere anyị aka n'ihe anyị chọrọ ime. Ya mere, a na ngwa bụ a nnọọ uru nhọrọ. Ọ nwere oke nchekwa data zuru oke yana ọtụtụ usoro nri na ezigbo nri iji belata ibu. Ntụziaka ahụ akọwapụtara na ngwa ahụ, mana ndị ọrụ nwekwara ike izipu nke ha.
Ọzọkwa, anyị nwere ike na-esochi nke ibu na calories iwesa ụbọchị ọ bụla. Nbudata ngwa na gam akporo bụ n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụta n'ime.
Ngụgụ Kalori - MyNetDiary
Nke a bụ nke anyị nhọrọ na ngwa kachasị mma ịhapụ ibu. Naanị budata ha na ngwaọrụ gam akporo gị wee bido ihe mgbaru ọsọ gị ugbu a. N'ihi ngwa ndị a ọ ga-adị mfe ịmezu usoro a na na-esochi mgbe niile na ọganihu gị. You jirila ngwa ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma idalata
Ihe ngosi ngosi 8 nke Galaxy Note bụ ugbu a